Ogaden News Agency (ONA) – Hailemariam Desalegn oo loo diiday inuu xidho shaadhkii Meles ..
Hailemariam Desalegn oo loo diiday inuu xidho shaadhkii Meles ..
Posted by ONA Admin	/ December 2, 2012
Itobiya qofkii qoriga fargaddiisa haysta umbaa xukuma. Arintaasi way u cadaatay hadda Hailemariam Desalegn. Sidaa waxaa ku bilaabay warqad uu noo soo qoray nin ka mid ah mucaaradka Itobiya oo Addisababa gudaheeda nagala soo xidhiidha. Waxay isku dayeen buu yidhi qawmiyadda Amxaarada iyagoo kaashanaya reer galbeedka inay si sharci ah ugala wareegaan xukunka qawmiyadda tirada yar ee Tigreega, hasa ahaatee waxay ogaadeen in Jeneraalada ka taliya Itobiya aan la dhaafi karin waxay rabaan. Waxaa si dhab ah loogu sheegay Hailemariam Desalegn oo daaqada uu ka soo galiyaya Meles Zanawi isagoo ku ilaashanaya danta qoyskiisa inuusan xidhan karin shaadhkii Meles Zanawi.
Waxaan horey u ogayn inay dhowr bilood qaadatay in loo dhaariyo Hailemariam Desalegn jagada, taasoo sida la sheegay ay ugu dambayntii u hogaansameen saraakiisha TPLF cadaadiskii dawladaha reer Galbeedka gaar ahaan Mareykanka oo warar xog-ogaal ah ay sheegeen inay ugu hanjabeen in laga xidhi doono hantida faraha badan ee dibadaha u yaala jananada Tigreega. Hasa ahaatee waxay kula balameen inuu siiyo 2ba jago oo ku xigeen R/wasaare ah oo waliba leh awood aanu ku soo faragalin. Ballantii sidaa ahayd wuu kaga baxay Hailemariam Desalegn, isagoo ka raja qaba inay u soo gurman doonaan dawladaha reer galbeedka markuu u baahdo. Wuxuuna siiyay jagadii R/wasaare ku xigeenka nin Amxaara ah. Talaabadaa uma cuntamin jananadii TPLF waxayna u arkeen inay tahay inqilaab lala maagan yahay. Waxay saareen cadaadis xoogan, waxayna joojiyeen guud ahaan hawlihii ka socday dalka, iyagoo waliba bilaabay amar diido iyo inay si badheedh ah u tusaan shacabka inuusan R/wasaare Hailemariam Desalegn dalka xukumin awoodna uusan lahayn. Waxay is-hortaageen waxqabadkii Kililada iyo inay fuliyaan awaamirtii ka soo baxaysay dawladda dhexe.
Ugu dambayntii waxaa qasab lagaga dhigay Hailemariam Desalegn inuu magacaabo 2ba R/wasaare ku-xigeen oo leh awood balaadhan. Waxay isla marahaantaa gacanta ku dhigeen arimaha ciidanka iyo maaliyada oo aanay u ogolayn in lagu soo faragaliyo. Sidoo kale siyaasadda arimaha dibadda oo ah meesha ay ka cabsanayeen saraakiisha TPLF in looga soo dhoco ayaa loo magacaabey Tedros Adhanom, oo ahaa Wasiirkii Caafimaadka kana mid ah Golaha Fulinta ee TPLF. Ninkan ayay la doonayeen Tigreegu inuu qabto jagada R/wasaarinimada.
Waxaa hubaal ah inuu noqday R/Wasaare aan awood lahayn Hailemariam Desalegn oo jagada si kusime-nimo ah u sii hayn doona inta ay TPLF-tu ku heshiinayaan dhexdooda qofkii qaban lahaa jagadii uu baneeyay Meles. Inta ka horeysa, saraakiisha ciidanka iyo sirdoonka oo 90% ah Tigree ayaa gacanta si dhab ah ugu haynaya dalka, hadaanay mucaaradka Itobiya dagaal dhab ah u galin xoriyadooda ayuu ku soo gunaanaday warqad dheer oo ninkaa mucaaradka ah uu nala wadaagnay.